Io indray ilay fahatahoran’ny FAT ny « legalista » ! – MyDago.com aime Madagascar
Manao « fuite en avant » hatrany ny FAT !
Tonga nitsena ireo maherifo avy namita ny adidiny tatsy Gaborone ny delegasionan’ny ankolafy telo io tolak’andro io.Tonga nitsena tamin’ny « basy » ihany koa ny herim-pamoretana ary dia nakatona mihitsy ny seranam-piaramanidina teo Ivato noho izany tahotra izany.
Na izany aza dia afaka nifanatri-tava ihany ireo mpitarika sy ny vahoaka.
Mampametram-panontaniana ny maro ihany ity fihetsika hataon’ny mpitandro filaminana ity, manaiky hatao fitaovana politika hiarovana mpanongam-panjakana hatrany ry zalahy ireto .
Inona ny fiovana teo?
Izay rehetra nanakianana ny filoha Ravalomanana tamin’ny fotoan’androny dia naverin’ny FAT avokoa ary vao maika aza nitombo avo telo heny, ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra no natao kobaka am-bava, ankehitriny miharihary toy ny tafika andrefan-tanana ny tsy ny zava-misy.Nankaiza ilay fiovana nadradradraina teny amin’ny kianjan’ny 13 mai?
Hampihorohoroana ny mpanao gazety !
Rahonana sy handraisana fepetra hono ny mpanao gazety nitatitra vaovao taty Gaborone araka ny nambaran’i Rolly Mercia, dia sahy hiteny ve ity mpanao gazety teo aloha ity fa madio sy tsara avokoa ny asa nataony teo aloha? ireo mpiserasera rehetra dia mahatsapa fa tafahoatra loatra ity fahasahian’i namana ity, ary vao maika hamboly fankahalana hoan’ny namana izao tranga izao.Raha tena mitana ny maha Ministra azy izy maninona raha mba nanantona io mpanao gazety heverina fa nibirioka io taty Gaborone?Mbola fery tsy mikatona manko no nanagadrany ireo mpanao gazety folo tao amin’ny Radio Fahazavana sy ny namana Evariste Ramanantsoavina.
Mamboly fahavalo hoan’ny tenany i Rolly Mercia, ary ahiana hiteraka valifaty ratsy hoan’ireo « victime » izany, izay tsy misy tombontsoa hoan’ny tsirairay mihitsy.
CLINIQUE AMBANJA-Mitaraina ny marary.
Auteur Solo Razafy*Publié le 8 juin 2011 Catégories Politique
1 réflexion sur « Io indray ilay fahatahoran’ny FAT ny « legalista » ! »
ny nampihomehy ahy de hoy ny midi hoe tany @ service frêt no nivoaka ny delegasion’ny HAT,f’angaha matahotra ny mpitsena sa nanao ratsy ka mahana?mbola aiza no hahazo e!raha ny accord de cotounou aloha no ampiharina de tena tsy ahazo avara-patana n’aiza n’aiza intsony ireto mpanongam-panjakana ireto,mbola azy aloha ny basy de mba be vava sy manely tsaho fa rehefa tonga saina ireo tafika tena manaja ny déonthologie de ho sahirana izy.
Précédent Article précédent : Sary Magro 07 ona 11
Suivant Article suivant : Après Gaborone ce sera Sandton!